Daawo sawiro: Ciidamadii isku hor fadhiyey difaacyada Gaalkacyo oo goor dhow lakala qaaday arin farxad leh! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo sawiro: Ciidamadii isku hor fadhiyey difaacyada Gaalkacyo oo goor dhow lakala qaaday arin farxad leh!
Daawo sawiro: Ciidamadii isku hor fadhiyey difaacyada Gaalkacyo oo goor dhow lakala qaaday arin farxad leh!
Ciidamadii maamulada Puntland iyo Galmudug ee isku hor fadhiyey galbeedka magaalada Gaalkacyo ayaa goor dhow oo galabta ah si rasmi ah loo kala qaaday sida wararka naga soo gaaraya Kala qaadida ciidamadan ayaa waxaa goob joog ka ahaa raisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo madaxda maaaulada Puntland iyo Galmudug iyo guddigii labada dhinac ka koobnaa ee loo xilsaaray nabadeynta Gaalkacyo.
Kulanka ayaa looga hadlay dardar galinta waxyaabaha ka dhiman oo ay ka mid yihiin dib u soo celinta dadkii magaalada ka barakacay iyo in Calaamad loo sameeyo Ciidamada labada Maamul si dagaalo kale looga baaqsado.
C/raxmaan Odowaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa isna talaabo horay loo qaaday ku tilmaamay kala qaadida Ciidamada Labada maamul isagoo maamulada iyo shacabka Gaalkacyo ugu baaqay iney ilaashadaan nabada, kana fogaadaan wixii xasarad abuuri kara.
Ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena wey ku dhaawacmeen dagaalo soo laalaabtay oo ciidamada labada maamul ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo, iyadoo ay ku barakaceen inta badan shacabkii ku noolaa magaladaas oo wali banaanada Gaalkaciyo duurkeeda uu roob iyo qorax kula dhaceysa waxaana surta gal ah in ee dib usoo laabato nabadii lagu yaqiinay Magaalada Gaalkaciyo.
Previous PostBeelaha Caabudwaaq oo ku dagaalamay 17-11 -2016- hub ka dhigis lagu samaynaayo Daawo!! Next PostSafiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya oo saldhigtay Nairobi kadib markuu siyaadasa qasay!!